ကျောင်းသင်ရိုးတွင် ၂ နိုင်ငံ သမိုင်း တည်းဖြတ်ခွင့် ပညာရေး သဘောတူမှု အစ္စရေး – မြန်မာ ချုပ်ဆို – မဟာခေတ်သစ်မီဒီယာ
ကျောင်းသင်ရိုးတွင် ၂ နိုင်ငံ သမိုင်း တည်းဖြတ်ခွင့် ပညာရေး သဘောတူမှု အစ္စရေး – မြန်မာ ချုပ်ဆို
02/06/2018 Yawthama0Comments
အစ္စရေးနဲ့မြန်မာတို့ကြား ပညာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တရပ်ကို တနင်္လာနေ့က လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြပါတယ်၊၊
အခုလို သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အကြောင်း အစ္စရေး ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Tzipi Hotovely က သူ့တွစ်တာမှာ ကြေညာခဲ့သလို အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမောင်မောင်လင်း နဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ ပုံကိုပါ တွစ်တာမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီသဘောတူညီချက်အရ holocaust လို့ခေါ်တဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေကို နာဇီတွေ အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့ပေး သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ၊ မတူကွဲပြားမှုကို လက်မခံတဲ့ကိစ္စ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ကိစ္စ၊ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားသားကြောက်ရွံ့စိတ်တို့ဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆိုးကျိူးတွေကို ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ ထည့်သွင်းသွားနိုင်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ အစ္စရေးနိုင်ငံ Haaretz သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်၊၊
ဒါ့အပြင် မြန်မာပညာရေးဆိုင်ရာ လေ့လာရေးအစီအစဉ်တွေကို အစ္စရေးက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး Hebrew ဘာသာစကားနဲ့ မြန်မာဘာသာစကား သင်ကြားရေးအတွက်လည်း အပြန်အလှန် လုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်၊၊ ဒီသဘောတူညီချက် အကောင်အထည် ဖော်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲ ကော်မတီတရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ၃ နှစ်တကြိမ် တွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်၊၊
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့က လက်နက်ရောင်းချမှု အပါအ၀င် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ပင်ထားချိန်မှာ အစ္စရေးနိုင်ငံကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စစ်ရေးအပါအ၀င် ခေတ်မှီလက်နက်တွေ ရောင်းချတာတွေနဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေတိုးပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလထဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်နက်ရောင်းချမှုမလုပ်ဖို့ အစ္စရေး အထက်တရားရုံးက တားမြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် အစ္စရေး မြန်မာသံတမန်ဆက်ဆံရေးကတော့ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေ တာပါ။
ဒီသီတင်းပတ်အတွင်း အစ္စရေးမှာ ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်က သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ဝန်ကြီးတွေ တက်ရောက်တဲ့ သိပ္ပံမူဝါဒဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ မကြာသေးခင်က ဂျေရူစလင်မှာ အမေရိကန် သံရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲ ကိုလည်း မြန်မာသံရုံးက ကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ အစ္စရေး နိုင်ငံထုတ် Haaretz သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Credit : VOA
← ဗမာေ တွ ချည်း ပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားေ သာ ဗမာပါတီမဟုတ်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးပြော
အထုံတွေ ရှိနေရင်လည်း သည်ဘဝနဲ့ကျေပါစေလို့ ရင်နဲ့အမျှဆုတောင်းပေးပါတယ် သမီးရယ် →
ပရိတ်သတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ Myanmar Idol Season3ရဲ့ Top2ဘယ်တွေသူဖြစ်လာမလဲ..?ပရိတ်သတ်အများစုရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
03/08/2018 Yawthama 0
Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကတော့ လက်တလောမှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ သီချင်း ဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့ MNTV မှာ အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနဲ့ သောကြာနေ့ တိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာပါ။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မြို့ကြီးတွေ အထိ သွားရောက်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ ကို
မနေ့ညက ချမ်းမြေ့မောင်ချို #ဖြိုးမြတ်အောင် #ဇော်ကြီး တို့ရဲ့ Myanmar idol season3ယှဉ်ပြိင်မှု စုံတွဲသီချင်းအပါဝင် သီချင်း ၆ ပုဒ်ကြည့်ရှုရန်
02/08/2018 Yawthama 0
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဆိုဗီယက်တွေသုံးခဲ့တဲ့ တင့်ကားဖျက်ခွေးများ
06/06/2018 Yawthama 0
ကျေးဇူးပြုပြီး ပုံပါမိန်းကလေးအတွက် သင့်ရဲ့ ရှယ် တချက်နဲ့ ကူညီပေးကြပါဦး
02/06/2018 Yawthama 0
အရမ်းချစ်စရာကောင်းလွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေဝိုင်းအုံချစ်တာခံနေရတဲ့ မြူလင်းကိုကို
မြ န်မာပြည် သူ ပိုင် ရွှေတွေ ကို သယ်ဆောင်လာတဲ့လေယာဉ်တစ်စင်း မြန်မာ့လေပိုင်နက်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသောအခါ
ခု န စ် လ သားအရွယ် သားလေးကို အချိန်ပေးနေတဲ့ တေးသံရှင် D ယံ
”ကျောက်နွား” —-ပရလောကဇာတ်လမ်း (စ/ဆုံး)
အမျိုးသမီးများ ဗိုက်ပူခါးတုတ် ကိုယ်လုံးမျိုးတွေ ဖြစ်မသွားရလေအောင်
စမတ်ဖုန်း မုန်တိုင်းသစ် တိုက်ခတ်စေခဲ့သူ (သို့) ရှောင်းမီဖုန်းရဲ့ နောက်ကွယ်က လေကျွင်း
31/05/2018 Yawthama 0
”ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက လူတွေကို ငရဲနဲ့ခြိမ်းခြောက်တာလား” ဆိုတဲ့ ဘာသာခြားတစ်ယောက်ရဲ့ မေးခွန်းကို ပညာသားပါပါဖြေထားတာလေး ဖတ်ကြည့်ပါ… . ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်းများ ဖတ်သင့်တဲ့စာမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကားဝယ်မယ်ဆိုရင် အခုပဲဝယ်ဝယ် နောက်မှပဲ ၀ယ်ဝယ် ဒါလေးကို ကျိန်းသေးသိအောင် ကြည့်ထားပါ။
သမီးပျိုများ သတိရှိပါ.. နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဒီသကြာလုံး စားမိရင် မိန်းကလေးငယ် တို့ စိတ် ကို လုံးဝ မထိန်းနိုင်တော့ပါ
“တပင်ရွှေထီးနှင့်အာဂထိုင်းမိဖုရား ဆူရီယိုထိုင်းတို့ ၏ အတိတ်ကသမိုင်း”
Copyright © 2018 မဟာခေတ်သစ်မီဒီယာ. All rights reserved.